နောက်နှစ်ဆို သူတို့တွေ အသက် ၄၀ပြည့်ပြီပြောရင် ဘယ်သူယုံနိုင်မှာလဲ? – Trend.com.mm
Posted on October 21, 2018 October 16, 2018 by Noel
ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အသက်ထက် ၂ဆလောက်ပိုငယ်ရွယ်နုပျိုနေတာ ဘာဆေးတွေစားထားလို့ပါလိမ့် 😛 အခုလည်း နောက်နှစ်ဆိုအသက် ၄၀ပြည့်တော့မယ့်အနုပညာရှင်စာရင်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အသက် ၄၀မဟုတ်ပဲ အသက် ၂၀ လို့ပြောရင်ရတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဆယ်လီတွေ
၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ဆိုရင် ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အသက်အရ အသက် ၄၀ပြည့်တော့မယ့်အနုပညာရှင်တွေဟာ ကိုယ်တွေက Oppa ၊ Unni လို့ခေါ်ရမယ့်အရွယ်ဆယ်လီတွေပါ။တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ အသက် ၄၀ဆိုတာ ဦးလေးတို့၊အဒေါ်ကြီးတို့ခေါ်ရမယ့်အရွယ်ပါပဲ။ကဲ ဘယ်သူတွေက ၂၀၁၉ ဆိုအသက် ၄၀ပြည့်တော့မှာလဲ ကြည့်လိုက်ပါဦး
ကိုရီးယားအနုပညာရှင်မိန်းကလေးတွေ၊မိန်းကလေးပရိသတ်တွေသဘောကျနှစ်သက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသားချော Kang Dong Won ဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ၂၀၁၉ ၊ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ဆိုရင် အသက် ၄၀ပြည့်တော့မှာပါ။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများစွာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Kang Dong Won ဟာ ဟောလိဝုဒ်အနုပညာလောကကိုလည်းခြေချနေပါပြီ။နောက်နှစ်ဆိုရင် သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတစ်ကားထွက်လာတော့မှာပါ။
အီဆောင်လို့ပရိသတ်တွေအသိများကြတဲ့ မင်းသားချော Kim Jeong Hoon ဟာလည်း နောက်နှစ်ဆို ၄၀ပြည့်တော့မှာပါတဲ့။တကယ်ကို မထင်ရက်စရာပါ။ကလေးမျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသားဟာ Princess Hours ဇာတ်ကားထဲမှာလူသိများလာခဲ့ပြီးမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အခိုင်အမာအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီးချောလေး Kim Tae Hee က တော့ အသက်ကိုထည့်မတွေးချင်မတွေးရလောက်အောင် ငယ်ရွယ်နုပျိုလှပသူလေးပါ။သူမကိုတော့ ၁၉၈၀ ၊မတ်လ ၂၉မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်ဆို အသက် ၄၀ပြည့်ပါပြီ။မင်းသား Rain နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ကလေးလေးတစ်ယောက်တောင်ရှိနေပါပြီ။
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးမော်ဒယ်လ်တွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် Jang Yoon Joo ဟာ သူမရဲ့ အရည်အချင်းကြောင့်ရော၊ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ကလေးမျက်နှာလေးကြောင့်ရော လူသိများထင်ရှားပါတယ်။သူမကို ၁၉၈၀ ၊နိုဝင်ဘာလထဲမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။အသက် ၁၇နှစ်မှာမော်ဒယ်လ်အလုပ်ကိုစလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ သီချင်းဆိုတာ၊သီချင်းရေးတာ၊သရုပ်ဆောင်ပိုင်းတွေမှာပါနေရာယူလှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ သူမက အသက် ၄၀ပြည့်တော့မှာပါ။
ဒီချစ်စရာမင်းသမီးလေးကိုတော့ ရှိလှ အသက် ၃၀ ပေ့ါလို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၉မှာ သူမလေးဟာ အသက် ၄၀ပြည့်တော့မှာပါ။ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး သူမရဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် Top Excellence Award ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ၂၀၁၈ မှာတော့ 2PM ရဲ့ 
Junho နဲ့ “Wok of Love” ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကမှအိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့မင်းသားချော Jo Jung Suk ဟာလည်း လာမယ့်နှစ်ဆို အသက် ၄၀ပြည့်ပါပြီ။သူ့ကို ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူလက်ထပ်သွားလို့ ပရိသတ်တစ်ချို့က အသည်းကွဲနေကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ့်အိုင်ဒေါလ်ပျော်နေတာမြင်တော့
“The Return of Superman”အစီအစဉ်က ပရိသတ်တွေ တအားချစ်ကြတဲ့ ကလေးမလေး Haru ရဲ့ဖေဖေဟာလည်း နောက်နှစ်ဆို အသက် ၄၀ပြည့်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းအသက်ထက်စာရင် နုပျိုနေဆဲပါ။၁၉၈၀ ၊ဇူလိုင် ၂၂ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရထားတဲ့ ကိုရီးယား-ကနေဒီယန် rapper တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူကသူတို့ကို အသက် ၄၀ပြည့်တော့မယ်ပြောရင်ယုံကြမှာလဲ?
ကိုရီးယားလူမြိုးတှဟော သူတို့ရဲ့ အသကျထကျ ၂ဆလောကျပိုငယျရှယျနုပြိုနတော ဘာဆေးတှစေားထားလို့ပါလိမျ့ 😛 အခုလညျး နောကျနှဈဆိုအသကျ ၄ဝပွညျ့တော့မယျ့အနုပညာရှငျစာရငျးလုပျကွညျ့တဲ့အခါမှာ အသကျ ၄ဝမဟုတျပဲ အသကျ ၂၀ လို့ပွောရငျရတဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲဆယျလီတှေ
၁၉၈၀ ခုနှဈမှာမှေးဖှားခဲ့ပွီး ၂၀၁၉ ဆိုရငျ ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အသကျအရ အသကျ ၄ဝပွညျ့တော့မယျ့အနုပညာရှငျတှဟော ကိုယျတှကေ Oppa ၊ Unni လို့ချေါရမယျ့အရှယျဆယျလီတှပေါ။တဈခွားနိုငျငံတှမှောတော့ အသကျ ၄ဝဆိုတာ ဦးလေးတို့၊အဒျေါကွီးတို့ချေါရမယျ့အရှယျပါပဲ။ကဲ ဘယျသူတှကေ ၂၀၁၉ ဆိုအသကျ ၄ဝပွညျ့တော့မှာလဲ ကွညျ့လိုကျပါဦး
ကိုရီးယားအနုပညာရှငျမိနျးကလေးတှေ၊မိနျးကလေးပရိသတျတှသေဘောကနြှဈသကျကွတဲ့ပုံစံမြိုးပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသားခြော Kang Dong Won ဟာ ၁၉၈၁ ခုနှဈမှာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး လာမယျ့ ၂၀၁၉ ၊ဇနျနဝါရီ ၁၈ ဆိုရငျ အသကျ ၄ဝပွညျ့တော့မှာပါ။ရုပျရှငျဇာတျကားတှမြေားစှာရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Kang Dong Won ဟာ ဟောလိဝုဒျအနုပညာလောကကိုလညျးခွခေနြပေါပွီ။နောကျနှဈဆိုရငျ သူပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ဟောလိဝုဒျဇာတျကားတဈကားထှကျလာတော့မှာပါ။
အီဆောငျလို့ပရိသတျတှအေသိမြားကွတဲ့ မငျးသားခြော Kim Jeong Hoon ဟာလညျး နောကျနှဈဆို ၄ဝပွညျ့တော့မှာပါတဲ့။တကယျကို မထငျရကျစရာပါ။ကလေးမကျြနှာလေးပိုငျဆိုငျထားတဲ့မငျးသားဟာ Princess Hours ဇာတျကားထဲမှာလူသိမြားလာခဲ့ပွီးမိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အခိုငျအမာအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မငျးသမီးခြောလေး Kim Tae Hee က တော့ အသကျကိုထညျ့မတှေးခငျြမတှေးရလောကျအောငျ ငယျရှယျနုပြိုလှပသူလေးပါ။သူမကိုတော့ ၁၉၈၀ ၊မတျလ ၂၉မှာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး နောကျနှဈဆို အသကျ ၄ဝပွညျ့ပါပွီ။မငျးသား Rain နဲ့လကျထပျခဲ့ပွီး ကလေးလေးတဈယောကျတောငျရှိနပေါပွီ။
တောငျကိုရီးယားရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးမျောဒယျလျတှထေဲမှာပါဝငျနတေဲ့ မျောဒယျလျ Jang Yoon Joo ဟာ သူမရဲ့ အရညျအခငျြးကွောငျ့ရော၊ငယျရှယျနုပြိုတဲ့ကလေးမကျြနှာလေးကွောငျ့ရော လူသိမြားထငျရှားပါတယျ။သူမကို ၁၉၈၀ ၊နိုဝငျဘာလထဲမှာမှေးဖှားခဲ့တာပါ။အသကျ ၁ရနှဈမှာမျောဒယျလျအလုပျကိုစလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျတော့ သီခငျြးဆိုတာ၊သီခငျြးရေးတာ၊သရုပျဆောငျပိုငျးတှမှောပါနရောယူလှုပျရှားနပွေီဖွဈပါတယျ။နောကျနှဈဆိုရငျတော့ သူမက အသကျ ၄ဝပွညျ့တော့မှာပါ။
ဒီခဈြစရာမငျးသမီးလေးကိုတော့ ရှိလှ အသကျ ၃၀ ပေ့ါလို့ထငျခဲ့တာ။ဒါပမေဲ့ ၂၀၁၉မှာ သူမလေးဟာ အသကျ ၄ဝပွညျ့တော့မှာပါ။ဇာတျလမျးတှဲမြားစှာရိုကျကူးခဲ့ပွီး သူမရဲ့ အရညျအခငျြးကွောငျ့ Top Excellence Award ဆုကိုလညျးရရှိခဲ့ပါသေးတယျ။ဒီ၂၀၁၈ မှာတော့ 2PM ရဲ့ 
Junho နဲ့ “Wok of Love” ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးတှဲလေးမှာပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။
မကွာသေးခငျကမှအိမျထောငျပွုသှားတဲ့မငျးသားခြော Jo Jung Suk ဟာလညျး လာမယျ့နှဈဆို အသကျ ၄ဝပွညျ့ပါပွီ။သူ့ကို ၁၉၈၀ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၂၆မှာမှေးဖှားခဲ့တာပါ။သူလကျထပျသှားလို့ ပရိသတျတဈခြို့က အသညျးကှဲနကွေပါသေးတယျ။ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျ့အိုငျဒေါလျပြျောနတောမွငျတော့
“The Return of Superman”အစီအစဉျက ပရိသတျတှေ တအားခဈြကွတဲ့ ကလေးမလေး Haru ရဲ့ဖဖေဟောလညျး နောကျနှဈဆို အသကျ ၄ဝပွညျ့ပါပွီ။ဒါပမေဲ့လညျးအသကျထကျစာရငျ နုပြိုနဆေဲပါ။၁၉၈၀ ၊ဇူလိုငျ ၂၂ရကျမှာမှေးဖှားခဲ့သူဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာရထားတဲ့ ကိုရီးယား-ကနဒေီယနျ rapper တဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ဘယျသူကသူတို့ကို အသကျ ၄ဝပွညျ့တော့မယျပွောရငျယုံကွမှာလဲ?